रोचक | BCM Nepal
यी ५ युवती मध्ये तपाईंलाई कुन युवती मन पर्यो ? एक रोज्नुस् र थाहा पाउनुस् आफ्नो व्यक्तित्व !
1 month ago by bcmnepalरोचक
काठमाडौं । यदि तपाईलाई व्यक्तिको खुबी सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने लाग्छ भने तपाई यस बारेमा कम जानकार हुनुहुन्छ । वास्तवमा हाम्रो मानसिक स्थिति कस्तो छ यसले हाम्रो व्यक्तित्वमा केहि हदसम्म प्रभावित गर्छ । त्यसैले जब कहिले तपाईको अगाडी कोहि व्यक्तित्व परीक्षण गर्न आयो र तपाईले… Read More
गर्भवती भएका बेला यौ’न सम्पर्क गर्न मिल्छ या मिल्दैन ? यस्तो भन्छ तथ्य
2 months ago by bcmnepalरोचक
काठमाडौं । गर्भवती महिलाहरू पेटमा बच्चा बसेको समयमा निकै सावधानी अपनाउछन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्य चोट लाग्दा पनि बच्चा खेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु विषेश सावधानी अपनाउन चाहन्छन् । त्यहि कारण हुनसक्छ अ’धिकांश महिला एवं पुरुषहरु गर्भवती रहेको समयमा यौ’न सम्पर्क राख्न चाहदैनन्… Read More
यस कारण हुन्छ महिलाको यो’नीमा एलर्जी
काठमाडौं । यौ’न सम्पर्कपछि कुनै महिलाको यो’नीमा एलर्जी हुने समस्या हुन्छ । एक अध्ययनले से’क्सपछि महिलाको यो’नीमा हुने एलर्जीको मुख्य कारण पुरूषको सीमन पनि हुन सक्ने देखाएको छ । चिकित्सककाअनुसार यो’नीको लाज्मा हाइपरसेंसीटिविटी बदलिने गर्छ । जसले गर्दा सामान्य सं’क्रमण हुने गर्छ । यस्तो समस्या… Read More
आफ्नो लागी योग्य जोडी कसरी चिन्ने
हामी हाम्रो वरपर आफूजस्तै व्यक्ति खोज्ने प्रयास गरिरहन्छौं, जो हामीजस्तै महसुस गर्ने होस् अथवा व्यवहार गर्ने होस् । यो खोज प्रेम स’म्बन्ध अर्थात रि’लेशनसीपका लाागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । जीवनमा आफू सुहाउँदो जोडीलाई लिएर सधैं नै सजग भैरहनु पर्छ । हाम्रो योग्य जोडी कहाँ र… Read More
आजकल मानिसहरुमा सोसल मिडियाको लत यतिधेरै बढेको छ कि दिनहुँ फेसबुकमा केही कुरा पोष्ट नगरेमा के के अपूरो जस्तो लाग्दछ । फेसबुकमा स्टाटस, फोटो तथा भिडियो पोष्ट गरेपछि त्यसमा आफ्ना फेसबुक साथीहरुको ध्यान खिचियोस् र प्रशस्तै लाइक्स तथा कमेन्ट्स प्राप्त होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ… Read More
श्रीमान् छाडेर फेसबुके प्रेमीको पछि लाग्दा….
आफैले रोजेको केटासित उनले बिहे गरेकी थिइन् । सबथोक ठीकठाक चलिरहेको थियो । विवाह गरेको २ वर्षमै छोरी जन्मिएपछि उनको परिवार औधी खुसी थियो । तर श्रीमान श्रीमती दुवै बेरोजगार हुँदा परिवार चलाउन समस्या भयो ।उनीहरूबीच बेला बेला विवाद पनि हुन थाल्यो । आर्थिक समस्याका… Read More
आफू भन्दा कम उमेरकी महिलासँग सुम्बन्ध राख्दा भुल्नै नहुने यी ५ कुराहरु
अधिकाँश जोडीलाई अवलोकन गर्दा उनीहरुबीचमा उमेरको अन्तर हुन्छ । र पुरुषको उमेर महिलाको भन्दा बढी नै हुन्छ । उमेरको अन्तर हुने स’म्बन्ध लाई सबै सुमधुर र कायम राख्नका लागि बढी उमेर हुने ब्यक्तिले जहिले पनि विभिन्न कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ पुरुषले आफू… Read More
म परदेशमा, श्रीमती अर्कैको अँगालोमा ‘कृपयाँ पढेर सल्लाह सुझाव दिनुहोला’
१९ वर्षको उमेरमा म वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी गएँ। ६ वर्ष जति काम गरेपछि मनले रोजेकी प्रेमिकासँग बिहे गरेँ। हाम्रो छ वर्षदेखि प्रेम थियो। म निकै खुसी थिएँ प्रेम सफल भयो भनेर। खाडीमा कमाएको पैसाले बिज्नेस गरेँ। तर भाग्यले साथ दिएन र फेरि घरमा बूढा… Read More
काठमाडौं । तौल कम गर्नु एउटा लामो प्रक्रिया हो जसमा तपाईंले व्यायाम गर्नु, सही भोजन गर्नु र केही जीवनशैलीका बानी जस्तै मद्यपान, धुम्रपानलगायतबाट छुटकारा पाउनुपर्छ । एउटा कुरा छ जुन धेरै जनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तौल कम गर्न चाहनेहरुले दिनको एक विशिष्ट समयमा… Read More
काठमाडौं । कामका लागि विभिन्न ठाउँमा गएका मजदुरहरु कोरोना भाइरसका कारण धमाधम गाउँघर फर्किँदैछन् । तर भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण टाढा टाढाबाट फर्किएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसालेर मात्रै गाउँघरमा छिराउने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको बसाइ पूरा गरेर घर फर्किने मजदुरहरुका लागि सरकारले कस्तो उपहार देला रु… Read More